दुई पांग्रेको पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेटः सुरक्षा चिन्ता कि कमिसनको चक्कर! | Nepali Radio Network radionrn.com दुई पांग्रेको पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेटः सुरक्षा चिन्ता कि कमिसनको चक्कर! | Nepali Radio Network
दुई पांग्रेको पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेटः सुरक्षा चिन्ता कि कमिसनको चक्कर!
५ जेष्ठ २०७६, आईतवार २०:१५
काठमाडौँ – काठमाडौँ उपत्यकामा मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा पछाडि बस्ने यात्रीहरुका लागि पनि हेल्मेट अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था ट्राफिक प्रहरीले फेरि गर्ने तयारी गरेको छ ।
पछाडि बस्ने यात्रीहरुले हेल्मेट नलगाएका कारण दुर्घटना बढेको तथ्यांकपछि ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पछाडि बस्नेका लागि पनि हेल्मेटको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
यसका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख एसएसपी वसन्तकुमार पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
चालक र पछाडि बस्ने दुवैका लागि हेल्मेट पनि उच्च गुणस्तरीय प्रयोग गर्न ट्राफिक प्रहरीले जोड दिएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट मान्यताप्राप्त हेल्मेटहरु प्रयोग गर्नुपर्ने नियम ल्याउन थालिएको एसएसपी पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
यता ट्राफिक प्रहरीले लागु गर्नेे तयारी गरेको पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य लगाउनुपर्ने नियमबारे सर्वसाधारणले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । हेल्मेटले केहीहदसम्म सुरक्षा प्रदान गर्ने भएपनि दुर्घटना न्यूनिकरणका अरु उपाय पनि अबलम्न गर्नुपर्ने आम नागरिकको सुझाव छ ।
सरकारले यसअघि पनि मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने नियम लागु गरेको थियो । तर, हेल्टेम लगाएर पछाडि बस्ने व्यक्ति अपराधका घटनामा संलग्न भएको भन्दै यो व्यवस्था हटाइएको थियो ।
अहिले फेरि ट्राफिक प्रहरीले पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट अनिवार्य नियम लागु गर्न खोजेको छ । यसको सफल कार्यान्नयन हुनेमा भने नागरिक विस्वस्त छैनन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले ट्राफिक प्रहरीको यो कदमलाई सुरक्षाको चिन्ता भन्दा पनि कमिसनको चक्करका रुपमा अर्थ्याएका छन् ।